Omenala nke Venezuela, gịnị bụ omenala ndị Venezuela? | Njem zuru oke
Ntughari Venezuela | | Venezuela
Venezuela bụ mba bara ọgaranya ebe ọdịbendị atọ dị iche iche na-agwakọta dika Spanish, ndi amaala na ndi Africa. Ihe akaebe nke a bụ akụkụ dị ukwuu nke omenala na ọdịnala nke Venezuela nke e si mba ọzọ, ọkachasị si Spain na ọtụtụ mba Africa. Omenala amaala emetụtakwala ọdịnala ndị a ma ama nke mba ahụ, n'eziokwu, ugbu a akụkụ dị mkpa nke mba ahụ sitere agbụrụ agbụrụ dị iche iche ka dị na Venezuela, ebe anyi huru Warao dị ka otu n'ime agbụrụ ndị nnọchi anya nke obodo na Yanomami.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ na-ewere omenala na ọdịnala otu, a ghaghị iburu n'uche na nke ọ bụla nwere ebe dị iche. Site na omenala anyị nwere ike ịtụle omume nke ndị Venezuelans bụ ndị otu a gbanyere mkpọrọgwụ na-egosi na ha bụ ndị mmadụ. Imirikiti ọdịnala Venezuelan bụ nke European, African na n'ezie ụmụ amaala. Mpaghara ọ bụla nwere omenala nke aka ya, ntinye mmụọ nsọ, akụkọ ifo a ma ama na ememme ndị a ma ama.
Kama ọdịnala Venezuelan Ha na-agbalisi ike idebe omenaala ha ketara n’aka ndi okenye. A na-ebufe ngosipụta ọdịnala site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ nke taa na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ egwuregwu, nri, okwu, ngwa egwu, ịgba egwu yana ọtụtụ ihe ndị na-ejikọ anyị n'oge gara aga. N'ime ọdịnala ndị Venezuelan, anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị mma nke ndị nnọchi anya ndị a nke steeti dị iche iche mejupụtara mba ahụ. N'isiokwu a, anyị ga-anwa ịmekọta ndị nnọchi anya kachasị.
2 Egwu ọdịnala
4 Traditionalgba egwu ọdịnala nke Venezuelan
5 Egwú mmụọ ọjọọ
6 Olili nke Sardine, ọdịnala ọzọ nke Venezuela
7 Saint John ememe
8 Okpokoro Caracas
9 Ihe ngosi San Sebastián
10 Papelones si Tacarigua
11 Rihe nke Kraist
12 Ọkụ nke Juda
13 Okpu okpu
14 Baccotaba na calillas
15 Ọdịnala omenkà ndị Venezuela
16 Omenala ekeresimesi nke Venezuela
Omenala Venezuelan ije bụ Nchikota nke ọdịnala ọdịnala ọdịnala yana ọdịbendị dị iche iche e si mba ọzọ weta, dị ka ọ dị n'ọtụtụ njirimara ndị ọzọ nke mba ahụ. Ihe eji eme ihe dika usoro eji eme ihe bu ihe ndi nna ochie jiri mee ya, mana imeghari gburugburu na mgbanwe mgbanwe nke uzo nke ebe ha tinyere.
Osisi, tinyere mkpisi na ahihia, bu isi ihe ndi ebo di iche-iche nke obodo jiri wee wuo obodo ebe ha biri, nke a na-ahu na ha na ndida-anyanwu ala anyi. N’ebe ndị mmiri gbara mmiri, a na-akpọ ụlọ ndị na-ese n’elu mmiri nke a rụrụ n’akụkụ ụsọ mmiri ejiri otu ihe di ka ihe eji eme ya n'oge ochie.
N’ebe ugwu, ụlọ abụghịzi elu ụlọ ebe ha ga-ehighọọ ezigbo ụlọ na ebe anyi huru patio nke etiti, uzo nke nwere otutu ime ulo na paseeji. Nsogbu dị n'ụdị ụlọ a na ugwu a bụ oke ala ebe ala ebe ha nọ.
Dabere n’ebe dị iche iche anyị gara na obodo ahụ, ma ọ bụ Andes, ụsọ oké osimiri, oke ọhịa ma ọ bụ mbara ala, ma dabere na oge nke ụbọchị, anyị nwere ike ịchọpụta etu ndị bi na ya ga-esi jiri egwu dị iche iche. Typicaldị egwu ọdịnala gosi ahuhu ndi soro ha bi kwa ubochi. Ejiri abụ ndị a dị ka abụ na-ada ụda nke na-esonyere ọrụ ndị nwoke na ndị nwanyị na-eme kwa ụbọchị n'ọhịa. Egwu ndị a sitere na oge ọchịchị nke ejiri ndị ohu ojii n'ọhịa ma jiri abụ ndị a gosipụta iru uju, ọ joụ, ahụmịhe ha ...
A chinchorro bụ ụdị ụgbụ ahụ kwụgidere na nsọtụ abụọ nke ụra ma ọ bụ zuru ike ruo ọtụtụ awa, nke a makwaara dị ka hammocks. Ejiri eriri moriche, ejiri ya mepụta ụdị ọrụ aka dị iche iche nke mba ahụ. Emepụtara chicharros nke mbụ dị ka nke dị ugbu a, na-agafe eriri atọ gburugburu osisi abụọ ahụ rapaara n'ime ala iji nwee ike ịkpa akwa ahụ ma nwee ike kee ha ọkara eriri ma mee ka ha chọọ oke.
Traditionalgba egwu ọdịnala nke Venezuelan
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ịgba egwu ọdịnala dị na Venezuela sitere na mmekọrịta nke ihe nketa Europe, karịsịa ndị Spanish, na ụmụ amaala na, na nke nta, site n'Africa. Dancegba egwu ọ bụla nwere njirimara nke ya mana ha niile ha ka chebe isi ihe nke Venezuelan mestizo, onye kwere ekwe na nke obi uto. Representativegba egwu ọdịnala ndị Venezuelan kachasị na mba ahụ bụ Sebucán ma ọ bụ Palo de Cinta, ndị Turas na Maremare.
Sebucán ma ọ bụ Stick nke rịbọn nke sitere na Europe nwere ịgba egwu gburugburu osisi, ọkachasị n'ememe ndị na-eme ọbịbịa oge opupu ihe ubi. Las Turas bụ ahụkarị anwansi okpukpe agba egwu nke ụmụ amaala si na-eme ememe na njedebe nke September ka daalụ ọdịdị maka uru ndị a natara t'oge b'ọ gbakashịhuru. Na ikpe azu anyi huru egwu Maremare na nsopuru onye nwuru anwu. Ejiri egwu nke egwu ndị a mee nke ọma na agba egwu gụnyere ịme usoro n'ihu na azụ.
Egwú mmụọ ọjọọ
Kwa afọ na emume nke Corpus Christi, ebe a na-emezigharị nkwenkwe okpukpe na anwansi nke ezi ihe banyere ihe ọjọọ, ndị mmụọ ọjọọ na-agba egwu na-agba egwu na mpaghara dị iche iche nke mba ahụ. Ndị mmụọ ọjọọ na-anọchi anya Lucifer yi uwe mara mma na nkpuchi nke na-anọchite ebumnuche ịrara aka na sacrament kachasị nsọ.
Ejikọtara ndị mmụọ ọjọọ na mkpokọta ma ọ bụ ọha mmadụ, ha na-ebu obe, rosaries ma ọ bụ ihe ọ bụla okpukpe na-eme na n'oge ememme ha na-ekpe ekpere, gụnyere uka. Ha na-eyi ogologo ọkpa na-acha ọbara ọbara, uwe elu ya na akwa ya ha na-eyiri mgbịrịgba na ahịhịa ndị koro n’elu uwe ha. Emere ihe masks ahụ na agba nwere obi ike na anya dị egwu, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ nke ahụ bụ ihe ha na-anwa ime. Ekike ekwensu nwere ngwa dị iche iche dịka ọdụ, mgbịrịgba, ozi na maraca. N'ịbụ ọdịnala a ma ama na mba ahụ dum, anyị nwere ike ịhụ ndị mmụọ ọjọọ egwu dị iche iche kesara na mba ahụ, mana nke kachasị mkpa bụ nke Yare, Naiguatá na Chuao.
Olili nke Sardine, ọdịnala ọzọ nke Venezuela
Dị ka ọ dị na Spain, olili nke sardine bụ ngosipụta a ma ama nke na-emechi oge ezumike nke emume Carnival ma kwenye na a ga-eme ya ọzọ n'afọ na-esote. Na ejị ememme jikọtara ya na Omenala iku azu anụ ezi nke ana akpọ sardine nke na egosiputa mmachibido iri anụ n’oge ụbọchị Rịọtaara. N'oge gara aga, ekwenyere na ngosipụta a bụ iji dọta azụ dị mma na ọmụmụ na ụmụ anụmanụ nke ga-ahụ nri maka ọdịnihu.
Usoro nke olili nke sardine bụ onye ọka iwu nke na-ahụ maka ihicha okporo ụzọ nke olili ozu ahụ ga-agafe, nwata nwoke ebe ịchụàjà na onye ụkọchukwu na-esochi usoro olili ozu nke mejupụtara E ji okooko osisi chọọ ya mma. N'ime mmiri a na-egosipụta ọnụ ọgụgụ nke sardine ahụ.
Saint John ememe
Ọ na-eme ememe dị ka na Spain na June 24 na usọrọ ọmụmụ nke senti. Ememe a na-ezukọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị kwere ekwe na ndị na-efe ofufe na steeti ndị a na-eme ememe ya, ebe ọ bụ na a naghị eme ya nhata na steeti niile nke Venezuela. Na June 24 n’isi ụtụtụ, onye nsọ dị njikere ịhapụ ụlọ ebe ọ nọ na chọọchị ahụ na-eso ndị ji obi ha niile na-efe ya ma si otu a rute na a na-eme emume nke ga-amalite ịmebe ịgbà ndị gafere n’obodo ahụ dum ya na onye di nso nke n’enweta obi ekele nke ndi kwere ekwe ka o n’agabiga.
Ejighi okpomoku nke ndi osi nri amaghi nri ndi Venezuelan, ma obu ndi isi nri nke nnukwu ulo nri, nri ndi Caracas. Amuru ya na ulo nke Venezuelans, nkpuru nke oru ya na oke ochicho na maka inweta nri kacha wee rie ha na ala na anumanu. Mgbe ụmụ nwanyị bidoro ilekọta kichin, nri Caracas bidoro na imepụta ihe ụtọ na ụtọ, ọkachasị mgbe ndị odibo na-ahụ maka ịme nri, iji nwaa imeju ndị na-elekọta ha.
Dị ka ọdịnala ndị ọzọ nke Venezuelan, nri ndị Venezuelan ọ na-enwe mmetụta n’ahụ́ ndị Spen, Ndị Africa na nke a bụkwa ụmụ amaala. Ahụkarị nri ndị Venezuelan bụ aja ọka, sado ojii, aubergine achicha ...
Ihe ngosi San Sebastián
San Sebastián International Fair bụ otu n'ime ọdịnala kacha mkpa Venezuelan na mba ahụ. A na-eme ya na obodo San Cristóbal, nke di na steeti Táchira, na ọkara nke abụọ nke ọnwa Jenụwarị. Ọzọkwa nke a maara dị ka Bullfighting Fair nke Venezuela Ọ bụ ọnọdụ kachasị mma maka ndị hụrụ ịlụ ọgụ na mba iji nwee ọ enjoyụ nnukwu ndị na-ese ehi n'ụwa niile.
Ngosipụta a na-adọta ọtụtụ ndị ọbịa si mba ọzọ ma nwee ahụmịhe awade nnukwu ntụrụndụ ohere na steeti Táchira dịka na mba ahụ dum, ebe ọ bụ na mgbakwunye na ndị na-achị ehi nke ama ama ama na mba ụwa, nnukwu ndị ọkachamara nke mba ahụ na-agakwa ngosi ahụ, nke na-adị ole na ole.
Papelones si Tacarigua
Tacarigua bụ obodo ndị na-akụ azụ na ndị ọrụ ugbo dị na agwaetiti Margarita. Kemgbe ọtụtụ afọ, ha na-eme akwụkwọ akụkọ ọhụrụ maka iji ya rụọ ọrụ na ire ya na obodo ndị ọzọ. Papelón na-abịa site na okpete nwere ụdị conical, ihe dị ka sentimita 20 dị elu na ntọala nke 10 na 15 centimeters. A na-ejikarị ya eme ka chocolate ma ọ bụ kọfị dị ụtọ, iji mee lemon ma ọ bụ raw guarapos.
Rihe nke Kraist
Mgbe izu ụka dị nsọ rutere, dịka na Spain, ndị ụka na-aga ụka maka ịchụ aja na ime ihe iji cheta omume nwa Chukwu mere maka mmadụ niile. Ma na Venezuela, e nwekwara a ihe nnọchiteanya nke ọha nke na-eme ka ụbọchị ikpeazụ nke Kraịst n'ụwa. N'ime nnọchi ndị a, anyị nwere ike ịhụ Mmasị na Ọnwụ Kraịst, nke mejupụtara ebe 15 nke na-akọ akụkọ banyere Jizọs Kraịst.
Ma ọ bụghị naanị na e gosipụtara Passion na Ọnwụ Kraịst, kamakwa ihe ngosi nke nbata nke Kraịst n’ime Jerusalem, ịba ụba nke achịcha ahụ, Nri Anyasị Dị Nsọ, ogige oliv, Via Crucis, Mbilite n’ọnwụ, ịkpọgide n’obe nọchiri anya ya.
Ọkụ nke Juda
Ọkụ nke Judas bụ otu n'ime ọdịnala Venezuela nke na-anọchite anya afọ ojuju nke ọha na eze n'ihe omume ndọrọ ndọrọ ọchịchị yana omume ha n'ozuzu, ma ọ na-eje ozi iji kwụsị Lenti site na ịkwadebe mbilite n'ọnwụ ya maka afọ na-abịa. Ihe kpatara ọkụ a bụ icheta nrara Judas raara onwe ya nye Kraịst, na-ezo aka n'omume raara onwe ya nye ndị ya. A na-eji akwa bekee, nke na-acha uhie uhie na akwa, nke jupụtara na ọkụ ọkụ, nke a na-agbanye ọkụ mgbe a kwụgidere nwa bebi ahụ ma kpọọ ya ọkụ.
Okpu okpu bụ Isi ego nke agwaetiti Margarita. N'agbanyeghị ọdịdị ya dị mfe, imepụta ntuziaka nke okpu ndị a adịghị mfe ma ọlị ma chọọ ọtụtụ nka iji nwee ike ịme ha. Typedị okpu a nwere ogologo oge nnabata dị ukwuu na mba ahụ na agwaetiti Caribbean, mana na afọ ndị na-adịbeghị anya mmepụta belatara ntakịrị, na-agbanwe maka mkpa ndị dị ugbu a. Na mgbakwunye na okpu nwere akụrụngwa, ha na-emekwa akpa, akwa, okpu ...
Baccotaba na calillas
A na-echekwa nka nke ịba ụba na ịsepụta ụtaba dịka otu n'ime ọdịnala ezinụlọ Venezuelan, n'agbanyeghị na n'afọ ndị na-adịbeghị anya ọrụ ndị ọzọ na-arụpụta akụ na ụba na-eme ya emepụta ụtaba na-ewe oche azụ. A na-ekepụta ụtaba na Calilla, iji mee sịga ụyọkọ nke ihe ahọrọ. N'aka nke ozo anyi nwere Anwaba, nke eji emeputa ihe buru ibu na mgbe nile. N'oge gara aga, a na-ere ụtaba na mba ahụ dum, mana n'ihi mbelata Mbelata ahụ, ọ na-eri ugbu a na Steeti na obodo nke Los Millanes ebe a na-ahụ ọtụtụ ihe ọkụkụ nke osisi a.
Ọdịnala omenkà ndị Venezuela
N'ime ngwaahịa ọrụ aka ọdịnala arụpụtara na Venezuela anyị nwere ike ịchọta ihe ịchọ mma, nri, ihe ọ drinksụ drinksụ, seramiiki, Caesarias, mmanya, akwụkwọ, eserese, akwa, akpụkpọ ụkwụ, uwe, ndị na-acha ọla edo, ihe ịchọ mma, ihe osisi, hammocks, hammocks ... Ndị a Ihe ngosi nka na-enye ndi bi na ya ohere gosiputa uzo ndu na nkpuru obi nke ndi Venezuelan.
Omenala ekeresimesi nke Venezuela
N'ịbụ ndị nwere nnukwu okwukwe, na mbata nke ekeresimesi, otu n'ime ọdịnala ndị Venezuela bụ n'akụkụ ọ bụla nke Venezuela na-akwadebe maka ọbịbịa nke nwa ọhụrụ Jizọs. Na mbido ọnwa Disemba, a na-amalite ị joyụrị ọ approachingụ nke ụbọchị ndị na-eru nso na nzukọ, tosta, mmemme iji mee ọbịbịa nwa ọhụrụ Jesus na mpaghara ọ bụla nke mba a na-adịwanye njọ Mana na mgbakwunye anyị na-ahụkwa ngosipụta ndị ọzọ na coscones nwere ike ịgbatị emume nke ekeresimesi rue ọnwa Febụwarị, dị ka ego ekeresimesi, nri anụ ụlọ, akpa akpa, Mass ndị ekeresimesi ekeresimesi, ngagharị, skateboard, ịgba egwu ndị ọzụzụ atụrụ, ụbọchị nke Holy Innocents, ọbịbịa nke ndị Magi, afọ ọhụrụ, afọ ochie ...
Anyị nwere olile anya na ị masịrị ihe ndị a niile Ọdịnala ndị Venezuelan ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị na-achọ ihe, ebe a ị nwere ike ịgụ ihe omenala na Venezuela ọzọ ahụkarị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Omenala nke Venezuela
Ahụrụ m mba m Venezuela n'anya, ọ mara mma, anyị ekwesịghị inwe mba ọ bụla anyaụfụ maka ihe ọ bụla, n'ihi na ọ nwere ihe niile, ihu ala, ụsọ osimiri, ugwu, osimiri, wdg. Ahụrụ m mba m n'anya, anaghị m agbanwe ya maka ihe ọ bụla, m hụrụ ọdịnala na ọdịnala ya n'anya
Zaghachi hildA DE MIRABAL
Uchenna Nwogu dijo
Nka bu ala nke na emeputa mmiri ara ehi na mmanụ a honeyụ! Amen ...
Zaghachi ka brian pinto
leanyeliili varela guillen dijo
Q desiccation jọgburu ịkpọasị dị ọcha jọgburu onwe ya
Zaghachi ka ọ bụrụ leanyeli varela guillen
Ndewo si Táchira, mpaghara nke ebe mara mma, ha bụ maka m nke elu igwe ọ bụ ya mere o ji maa mma, Venezuela, anyị ekwesịghị inwe mba ọ bụla anyaụfụ maka ihe ọ bụla, n'ihi na ọ nwere ihe niile, ala, osimiri, ugwu, osimiri, wdg. Ahụrụ m mba m n'anya, anaghị m agbanwe ya maka ihe ọ bụla, m hụrụ ọdịnala na ọdịnala ya n'anya. Site na La Grita.
Zaghachi EMMA SANCHEZ GARCIA.
ìhè angelinys okooko osisi prada dijo
hello si Mamporal Venezuela bụ nnukwu obodo ma ọtụtụ ọdịnala nwere ọtụtụ ihe mụ na anyị niile nwere ike ịnụ ụtọ na ihe ndị ahụ bụ osimiri, osimiri, ogige ntụrụndụ, ugwu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ Venezuela nwere ọkọlọtọ ya, ukwe ya na n'ezie ala nna a na na Venezuela ị nweghị ike ịnweta nri ma ị na-anụ ezigbo ohi na akụkọ ahụ, obere obere mba m ga-agbanwe, amaara m, ọ bụghị azụ ma na-aga n'ihu na maka nke ahụ naanị m agaghị agbanwe, ọbụnadị maka ọla edo na Venezuela.
Nzaghachi luz angelinys flores prada
Venezuela bụ nnukwu obodo ma ọtụtụ ọdịnala nwere ọtụtụ ihe mụ na anyị niile nwere ike ịnụ ụtọ na ihe ndị ahụ bụ osimiri, ụsọ mmiri, ogige ntụrụndụ, ugwu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ Venezuela nwere ọkọlọtọ ya, ukwe ya na n'ezie ala nna ugbua na Venezuela enweghị ike ị nweta nri ma naanị ị nụrụ ya na akụkọ, ezigbo ohi, obere nke nta mba m ga-agbanwe, amaara m, ọ bụghị azụ ma na-aga n'ihu na naanị nke ahụ agaghị m agbanwe Venezuela, ọbụnadị maka ọla edo. n'ihi na m bụ elu nke eluigwe ọ bụ ya mere o ji maa mma, Venezuela m, anyị ekwesịghị inwe mba ọ bụla anyaụfụ maka ihe ọ bụla, n'ihi na ọ nwere ihe niile, ala, osimiri, ugwu, osimiri, wdg. Ahụrụ m mba m n'anya, anaghị m agbanwe ya maka ihe ọ bụla, m hụrụ ọdịnala na ọdịnala ya n'anya. Site na La Grita. Ahụrụ m mba m n'anya, Venezuela, ọ mara mma, anyị ekwesịghị inwe mba ọ bụla anyaụfụ maka ihe ọ bụla, n'ihi na ọ nwere ihe niile, ala, osimiri, ugwu, osimiri, wdg. Ahụrụ m mba m n'anya, anaghị m agbanwe ya maka ihe ọ bụla, m hụrụ ọdịnala na ọdịnala ya n'anya
Zaghachi ka m nyeghachi gị
Obodo m kacha mma, o nwere omenaala na omenaala kacha mma
Zaghachi na Keudys garcia
Ndewo, a bụ m Verónica Jaramillo na abụ m Tigres, a hụrụ m ọzụzụ a n’anya, enwere m olileanya na ihu akwụkwọ niile dị otu ahụ nwere ọtụtụ echiche.
Zaghachi verónica Jaramillo
Abụ m Onye Kraịst
Zaghachi ka ịgba egwu
Daalụ maka itinye ibe a
N'agbanyeghị ọnọdụ anyị bi na ya, Venezuela bụ mba kachasị mma .. Ahụrụ m ya n'anya ga-aga n'ihu ebe a .. omenaala ya na ọdịnala m .. Abụ m Andean na enweghị ndị dị mma ma na-arụsi ọrụ ike dị ka Gochos
Zaghachi ka zoraida ramarez
Ndewo, a na m achọ enyi nwanyị, sị 33
Zaghachi jon mayorca
AKWETKWỌ A B IS NT COKWU ND TO NA-AH SE ELỌ ỌR M ỌZỌ VENEZUELA NA Omenala ya
Ahụrụ m mba m n'anya, ọ kachasị mma n'ụwa ma ọ bụ ezie na n'oge a anyị amachaghị nke ọma, amaara m na ndị Venezuelan ga-ahapụ obodo a… Mụ na obodo m…. Anyị bụ ndị agha na anyị ga-agbachitere ya niile costs.
Zaghachi onye ara
dị ezigbo mma mana nkwanye abụghị papelones de Tacarigua, ihe onyonyo a sitere na obodo Quebrada Negra nke dị na obodo Seboruco, steeti Tachira
Zaghachi johana gonzalez
Ahụrụ m isiokwu a n'anya .... ọ dị ezigbo mma na n'ezie a na m asọpụrụ ya. Ana m ekele gị .... # amovenezuela
Zaghachi yonelkis ugas
Otu esi esi Havana gaa Varadero